Letter na-Citizen Buba: Dousing Mmeghachi omume eletrik Ịnye ọnụahịa
Site: May Anokuru March 29, 2014
Dị ka akwụkwọ ozi ọha na eze na ngalaba na nso nso a dị ịrịba ama akụkụ na Nigeria, o nwere ike ọ ịbụ nke ebe ose elu a na-emekarị site na-agbakwụnye m - N'ihi na oriri nke na-ahụkarị Nigerian. The Nigerian ọkụ eletrik na-azụ bụ bipụta nnata nke m na-emeghe akwụkwọ ozi, dị ka chịkọtara site Citizen Buba, bụ onye ugbu-enyo anyị enyo (na ọtụtụ nde ndị ya ụdị) nke ọjọọ ịnye ọnụahịa nke electric ike Naijiria post-privatization oge.
Nke a mpempe iji na dousing yiri ọjọọ mmeghachi omume gburugburu, na iji wepụ nnukwu akpịrịkpa si Citizen Buba n'anya.
M na-emetụkwa itinye akọwa aha, "Citizen", aha gị n'ihi na mmezu na gị anya ihe na-eme ịnye ọnụahịa ma ọ bụ ọnụego nke ọkụ eletrik ọkọnọ dị ọcha echiche nke ndị a na ekenyenede site ọtụtụ nde ndị ọzọ na ọkụ eletrik na-ejere na Nigeria. Yabụ, ị na-anọchi anya ahụkarị Nigerian amaala, na-akpọlite ​​nku anya na-egosi n'ụzọ doro anya atụmanya nke ihe na-eme banyere udu ga-akwụ ụgwọ maka ọkụ eletrik, ugbu a na naanị na-agba ọsọ ventures emeela n'elu akụ maka ọgbọ na nkesa nke electric ike, n'ihi na nso nso kwubiri privatization nke ike oru.
Ọ bụghị nke ebe na-atụ anya ọha retort ọ bụla ukara abawanye na udu nke ọkụ eletrik na-azụ. Nke a bụ ihe mere nke a akwụkwọ ozi na-eduzi gị, dị ka ihe ọmụma na ọpupu-on ga-eme ka ọha na eze na nghọta, na ekemende douse ọ bụla ọjọọ ọha mmeghachi omume. N'ịbụ a Nigerian n'ji onwe m, M nnọọ echeta yiri ajụjụ ewere udi n'uche gị dị ka ị na-aga site na nke a akwụkwọ ozi.
Otu adịghị ga-abụ clairvoyant ka ha na i nwere ajụjụ ndị a n'uche: (a) Ga-adịbeghị anya kwubiri privatization n'ihi na ọnụego abawanye? (b) Ọ bụrụ na ee, ihe bụ bụkwanụ n'ihi na ndị dị otú ahụ? (c) Gịnị ka a pụrụ ime banyere mitigating mmetụta na ratepayers, ma ọ bụrụ na ọnụego abawanye ime? Tupu a zaa ajụjụ ndị a, Na-amasị m tụọ ihe Nigerian ahịa ugbu a mkpesa banyere (N'ihi ya ọ bụla nke na-egosi price mmụba na-eme revulsion), site na-atụba nza nke ìhè na ihe obtains ugbu na-akwanyere ihe ọhụrụ a iji esetịpụ anyị, na-azụ.
Ebe, Enwere m olileanya na ị na-aghọta na ọ bụ a bit siri ike na-arịọ ndị mmadụ ka ha kwụọ ụgwọ maka a ngwaahịa na-n'okpuru-ọnọ, dị ka electric ike ugbu a? Ọ bụkwaghị ozi ọma na ọtụtụ Nigerian ezinụlọ na azụmahịa iche na-agụụ nke eletrik. The ahụkarị Nigerian ahịa na electric ike ahịa, dị ka ndị na-ọzọ climes, nwere ihe abụọ bụ isi na-akpata nchegbu nke na-ezi isi, ma na-nyere iji nke mkpa – Nche nke ọkọnọ, na price. Anyị na-eche na nke ikpeazụ a, dị ka ihe mbụ aha ke usoro isiokwu a ka kwara nke ọkọnọ mgbe expatiating na nkesa netwọk ike àgwà.
Tupu delving ihe esetịpụ ugbu dị ka akụkụ nke ọhụrụ, biko adịghị jide ya megide m ma ọ bụrụ na m chitụ gị ka ị na-echeta na, "Na-ajụjụ ọ bụla, e nwere a n'elu azịza na a miri otu ". The miri azịza gị ajụjụ na ịnye ọnụahịa bụ ihe n'ezie bụ ndị udu ma ọ bụ ebubo na-egosi na gị kwa ọnwa ọkụ eletrik ịgba ụgwọ. Ebe, adịghị echefu ihe a – Gị ọnwa ụgwọ (nke bụ a ụgwọ maka oriri nke electric ike ma ọ bụ ọkụ eletrik) no notu nke abụọ ngalaba:
(a) Ebubo (mgbe akpado ike ụgwọ) dabeere na eletriki ike (na kilowatt-awa ma ọ bụ kWh) iwesa site na ezinụlọ ma ọ bụ azụmahịa n'oge ọnwa. Ọ na-agụnye ụgwọ jikọtara ya na mmepụta nke ọkụ eletrik (ha na ọkụ eletrik); ụgwọ ịwa na ịnọgide na-electric nnyefe usoro (ebute ya site na okporo); na-ana maka na-akpụ akpụ na ọkụ eletrik n'elu nkesa edoghi n'ụlọ gị gị na ma ọ bụ azụmahịa (ekesa ya nọ n'ógbè gị); na ahịa ochichi usoro (akwụ ụgwọ abuana ke ochichi nke na-ere ya ka ị na-).
(b) A obere ọkụ eletrik chepụtara echiche (mgbe kwuru na dị ofu kwa ọnwa ụgwọ, ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ego). Nke a ikpe nleghari maka ịgba ụgwọ, mita agụ, ọrụ oku omume, ọrụ akara mmezi na ọhụrụ ngwá echichi.
Citizen Buba, mara na a ọnọdụ ebe ị na-ekpebi ghara ọbụna na-aṅụ otu kWh n'ụlọ gị ma ọ bụ azụmahịa ogige n'oge ọnwa, (a) n'elu na-agụ efu, mgbe (b), ụgwọ ọrụ n'ihi na ọnwa, dị ka ndị a sịrị na gị na udi nke ahịa, anọgide gbara ụgwọ megide akaụntụ gị. Nigerians ga iburu n'uche mgbe nile na echiche nke Service n'Aka na ịgba ụgwọ usoro bụghị na ọdabara naanị ebe a (abụghị 'Nigerian ihe'), ma obtains n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Biko onwe iji nyochaa a. Aga site anyị obodo parlance, ụgwọ ọrụ bụ a "n'aka onye oru banki".
On ma privatization nke ike oru mere ọ bụla ọnụego abawanye ma ọ bụ n'ụzọ, Azịza ya bụ na 'Ee'. Ọ mere, ma marginally. The privatization na-akpọ maka iwebata a ịnye ọnụahịa ọchịchị akpado Multi Year tarifu Order (ỤTỤ OKPORO ỤZỌ), etinye n'ime ebe site Nigerian eletrik usoro iwu Commission ma ọ bụ NERC. Ọ na-aduak ime mkpebi siri ike nke na-eri nke ọkụ eletrik na-eresị site nkesa (na mkpọsa) ụlọ ọrụ si June 1, 2012 ka May 31, 2017. Na a nutshell, na-enweghị MYTO investors ga-nyere a obosara ebe ndina ka ego a na mpaghara, na privatization mmega gaara a flop, dị ka ala ịnye ọnụahịa agaraghị amịghịkwa eri mgbake maka investors. N'ihi na ihe, Ebe, M na-agba ka ị gaa na NERC si na saịtị weebụ. (Ka ga-aga n'ihu)
1 Comment on "Letter na-Citizen Buba: Dousing Mmeghachi omume eletrik Ịnye ọnụahịa"
jovie | June 9, 2014 na 2:18 pm | Zaghachi
n'eziokwu, a otutu kwesịrị ka a na-eme banyere ọkụ eletrik na Nigeria. anyị na-eme atụmatụ na-otu n'elu 20 aku na ụwa na a na ụbọchị na afọ, na-aghaghị maa-enweta na mma ike akụrụngwa. m na-atụkwasị obi na ndị ọchịchị ga-anọgide na-eme ka mma atumatu ma hụ na ha na-etinyere